Vagadzira chikwama & Vanotengesa - China wallet Factory
Computer bhegi kumashure
Vakadzi vatsva chikwama ...
Vanamai wallet refu chikamu ...
Zvakareruka fashoni vakadzi madiki ...
Varume Wallet refu Wallet Varume Vechidiki Fashoni Classic Buckle Multi-Kadhi Position 3 Fold Litchi Pattern Soft Leather Wallet Kadhi Case
Yakagadzirwa neyemhando yepamusoro uye nharaunda ine hushamwari PU ganda. Iyo yakasvibirira litchi poda yakapfava, inofema, inonzwa zvakanaka, uye inogona kucheneswa neyemarara jira.
Magnetic mafupi chikwama chechirume chipfupi chakakomberedza chisina kujairika chikwama
Yakagadzirwa neyemhando yepamusoro yePU zvinhu, yakakura-kugona dhizaini, unogona kuisa mafoto, makadhi ebhengi, mabhengi, mabhangi, kusunungurwa shanduko, nezvimwewo, yakavanzika zipper dema grid inogona kuisa yakakosha macheki, nezvimwewo, yakachengeteka uye yakavimbika.
Vanababa wallet yakakura kugona ganda rudzi 2020 nyowani yekutanga yefoni yeChinese bhegi fashoni zipper chikwama
Iyi hombe-yakakura clutch wallet yakagadzirwa nehupamhi hwepamusoro, hune hutano uye zvakatipoteredza hushamwari PU. Chimiro chemafashoni, mavara akapfuma, isina mvura, kunyorova-chiratidzo, chakasimba, kunzwa kwakanaka kweruoko uye kunogona kucheneswa nejira rakanyorova.
Varume chikwama varume refu yakaonda chikamu akamira chikamu 3 kupeta akawanda-kadhi nzvimbo chinzvimbo yakakura fashoni chikwama chitsva
yakakwirira-yepamusoro uye nharaunda inoshamwaridzika pu ganda, isina mvura, kunyorova-chiratidzo, inofema, yakapfava uye yakashongedzwa yekupeta chikwama, kusununguka kunzwa, bhizinesi zvipo, rwendo rwekuyeuka, chisarudzo chakanakisa chemazuva ekuzvarwa emapato.
Vanamai madziro chikwama refu chikamu yakakura zviyero zviviri zipper clutch chikwama chikadzi mbiri-danho clutch bhegi fashoni chikwama
Iyo yechipiri-zip inoshanda yakakura-chiyero clutch yakagadzirwa nehupamhi hwepamusoro uye zvakatipoteredza hushamwari PU zvinhu. Iyo isina mvura, unyoro-chiratidzo, inoratidzika zvakakwana, mavara mazhinji, akareba, kunzwa kwakanaka, anogona kucheneswa nejira rakanyorova.
Nyowani vakadzi dhiraivha bhegi chikwama refu akareruka mutsauko kupakata zipper wrist bhegi
Iyi vertiki chikwama chakagadzirwa neyemhando yepamusoro nharaunda inoshamwaridzika PU zvinhu uye nemaoko-yakagadzirwa ruvara inoenderana. Ruvara runofananidza chimiro, fashoni yakawanda-ruvara, tassel pendant yekushongedza, isina mvura, unyoro-chiratidzo, yakasimba uye yakasimba, yakazara chimiro inonzwa zvakanaka, inogona kushambidzwa nejira rakanyorova.
Varume wallet refu zipper wallet bhizinesi rakajairika mbozhanhare mbozha mbozha
Yakagadzirwa yemhando yepamusoro yemhoteredzo yakasununguka PU ganda. Inonzwa zvakanaka uye inogona kushambidzwa nejira rakanyorova. Mvura isina mvura, inofema, yakapfava uye yakatsiga, yakakwira-kuguma mhando.
Nyowani vakadzi chikwama chechikwama bhegi rechikadzi refu chikamu Kikorea zipper kusiyanisa ruvara tassel yakakura kugona chikwama nhare mbozha
Ichi chikuru chikwereti-chikwama chine retro dhizaini, yakagadzirwa yakakwirira-mhando, zvakatipoteredza hushamwari uye hutano PU ganda. Mvura isina mvura, unyoro-chiratidzo, yakajeka yemhando dzakawanda-ruvara, yakagadzikana kunzwa, yakanaka uye yakasimba.
Nyowani bhizinesi clutch bhegi handbag refu zipper clutch bag rakawanda-inoshanda varume bhegi
Inonyatsosarudzwa yakakwirira-yakasarudzika nharaunda ane hushamwari PU ganda. Yakatsetseka kubata, yakazara yakazara chimiro, uye inogona kushambidzwa neyemarara jira.
Vechidiki Vakadzi Vakareba Wallet Mafashoni Akavhurika Wallet
Yakagadzirwa yemhando yepamusoro, ine hutano uye nharaunda ine hushamwari PU ganda. Yakanakisa mhando, isina mvura, inofema, kubata kwakanaka, uye inogona kushambidzwa nejira rakanyorova.
Casual Varume Wallet Yakareba Clutch Bhegi Zipper Wallet Multifunctional Handbag Yevarume Wallet
Nezvakatipfuura ushamwari PU zvinhu zvinosarudzwa, isina mvura, unyoro-chiratidzo, nyoro uye hutano. Iyo yakareba makubhiti 3.9 inches x 3.5 inches x 1.2 inches (anenge 10 cm x 9 cm x 3.2 cm) uye inorema 110 gramu.
Fashoni itsva Ultra-yakaonda chikwama yakawanda-kadhi kadhi 3 pwere yechidiki zipper yakatenderedza bhizinesi rakapetwa chikwama
Iyo yakakura-kukwanisa dhizaini yechi wallet inogona kunyatsogonesa zvese zvinodiwa. Iyo ine 8 nzvimbo dzekuchengetera makadhi echikwereti, ayo anogona kusangana nezvinodiwa zvezuva nezuva bhizinesi, kufamba uye kunotenga.
© Copyright - 2010-2020: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. ,